किन गर्छन् मानिसले पशुसँग याैन सम्पर्क ?
Home others किन गर्छन् मानिसले पशुसँग याैन सम्पर्क ?
भारतमा एक गर्भवती बाख्रालाई मानिसहरुले सामूहिक बलात्कार गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा आयो ।
भारतकाे हरियाणा मेवात इलाकामा २५ जुलाईमा गर्भवती बाख्राको सामूहिक बलात्कार भयाे बलात्कार पछि भोलिपल्ट बाख्राको मृत्यु भएको खबरले भारतमा हंगामा नै मच्चाइिदयाे ।
जनावरसँग ‘सेक्स’ गर्नुलाई अंग्रेजीमा बेस्टिएलिटी भनिन्छ । यसको अर्को एक अर्थ पनि छ ‘अति क्रूर व्यवहार’ ।
अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार कुनै व्यक्ति र जनावरबीचको शारीरिक सम्पर्कलाई बेस्टिएलिटी भनिन्छ ।
नेसनल सेन्टर फर वायोटेक्नोलोजी इन्फरमेसन अर्थात एनसीबीआई वेबसाइटका अनुसार कुनै व्यक्तिले जनावरसँग सेक्स गर्नु ज्यादै गम्भीर विषय हो । तर जनावरमाथि हिंसाका जुन मुद्दा दर्ता हुन्छन्, त्यसमा यस प्रकारका मुद्दा निकै कम हुन्छन् । यो दण्डनीय अपराध हो ।
भारतमा यस्तै घटनामा संविधानको धारा ३७७ अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । भारतका साथै धेरै युरोपीय देश जस्तै नेदरल्याण्ड, फ्रान्स तथा स्विजरल्याण्ड, डेनमार्कमा यो प्रतिबन्धित छ ।
यसका अलावा जर्मनीमा पनि यो प्रतिबन्धित छ । ब्रिटेनमा सन् २००३ मा यससँग सम्बन्धित सजायमा संशोधन गरियो र आजीवन कारावासको व्यवस्थालाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरियो ।
मनोवैज्ञानिक डा. प्रवीण भन्छन् कि असामान्य सेक्सुअल एक्टिभिटीलाई पेरिफिलिया भनिन्छ ।
पेरिफिलिया धेरै प्रकारका हुन्छन् । बेस्टिएलिटी योमध्येको एक हो । बेस्टिएलिटी असामान्य व्यवहार र बिरामीको बीचको अवस्था हो । तर असामान्य व्यवहार मात्रै होइन । नेक्रोफिलिया यसको दोस्रो प्रकार हो, जसमा व्यक्तिले कुनै मृतकको साथ शारीरिक सम्बन्ध राख्दछ ।
यसको प्रमुख कारणमा बाल्यकालमा नराम्रो अनुभव, एक्लोपन र मानसिक समस्यालाई लिन सकिन्छ ।
एक्सक्लुसिभ पशुप्रेमी- यस्ता व्यक्तिहरु केबल पशुहरुसँग मात्र सेक्स गर्छन् । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous articleदेशभर ९० प्रतिशत राेपाइँ सकियाे, ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने कृषि मन्त्रालयकाे लक्ष्य
Next articleगर्भवती महिला स्वास्थ्य चाैकी गए अण्डा उपहार !